Ukubukwa Okuthokomele kwe-Retro Desert ☀️🌵Nat 'l Park - I-Airbnb
Ukubukwa Okuthokomele kwe-Retro Desert ☀️🌵Nat 'l Park
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Angelica
Indawo enhle e-Southwest Tucson phezulu ngokumelene ne-Tucson Mountain Park ne-Saguaro National Park West. Sizungezwe ukubukeka okumangalisayo kwendawo yasehlane nezintaba, nemizila eminingi yokuqwala izintaba. Ikamelo lokulala elizimele nendlu yangasese enobhavu w/umbhede we-Queen ontofontofo kakhulu. I-Wifi esheshayo, indawo yokusebenzela, isihlalo sokuphumula, ukudla okulula, ikhofi/itiye, ifriji elincane, i-microwave nokufinyelela ekhishini nasegumbini lokuhlanza izingubo. Indawo ezungeze amadolobha amakhulu ephephile w/indawo yokupaka esemgwaqweni. Eduze kwesikhumulo sezindiza, ukuthenga, i-Downtown ne-U of A (imizuzu engu-15 nje).
Izivakashi zinekamelo lokulala elingasese negumbi lokugezela eliphelele elinakho konke okudingekayo (i-shampoo/i-conditioner, insipho, ukugeza umzimba, i-lotion, i-Q-tips, i-floss, izindwangu zokugeza, amapulagi ezindlebe, i-lint roller, njll). Sinomatilasi ofuthwayo wesivakashi sesithathu endaweni futhi sizokuhlelela wona lapho ucela. Izivakashi zingasebenzisa insipho yethu yokuwasha izingubo ngaphandle kwezindleko, futhi sinebhodi loku-ayina/loku-ayina (elisegumbini lokuhlanza izingubo). Le ndawo yaphansi ye-Airbnb ilungele izivakashi ezihlala isikhathi esifushane, futhi ungasebenzisa ikhishi lethu eliyinhloko ukuze upheke kalula. Phezulu kwe-cul de sac yethu, kunedwala elihle elibizwa ngokuthi i-Beehive Peak, ungaya phezulu ukuze ubone indawo emangalisayo! Kunenqwaba yemizila yokuqwala izintaba enamakhanda emizila eqala emizuzwini engu- ukusuka ekhaya lethu ezokuhambisa kuma-saddleback amahle asezintabeni ambozwe ku-Saguaro cacti edumile! Siyakuthanda ukuthi sisemvelweni futhi siseduze ne-Central and Downtown Tucson (Iqhele ngamakhilomitha angu-8, ngemizuzu engu-15 ngemoto). Uzohlanganiswa yindawo enhle yasehlane nezintaba ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Sinezilwane ezifuywayo (amakati nama-bunnies amabili). Izilwane zethu ezifuywayo azivunyelwe nhlobo ezindaweni zezivakashi ze-Airbnb, ngaphandle uma ukhetha ukushiya umnyango wakho wekamelo lokulala uvulekile, futhi cishe zizoba nelukuluku lokwazi futhi zize zikuvakashele!
I-Westview Pointe Neighborhood. Sishiyekile emvelweni eduze nepaki likazwelonke nelombuso, kodwa sisasondelene nezindawo zokudlela, izindawo zokuthenga, i-Downtown Tucson, i-U of A, nesikhumulo sezindiza. I-Downtown iqhele ngamamayela angu-8, futhi isikhumulo sezindiza sikude ngamamayela angu-7.7, ngakho cishe yimizuzu engu-15 yokuhamba ngemoto. Sihamba ngemizuzu engu-7 ngemoto ukusuka emgwaqeni omkhulu we-I-19. Kukhona isiteshi segesi nezindawo zokudlela eziningana/amaketanga okudla okusheshayo ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka ekhaya lethu uma ungakhathazeki ngokuhambahamba imizuzu engu-15-20. Izikhungo ezinkulu zokuthenga nezitolo zokuthenga ukudla ezifana ne-Safeway, i-Walmart Neighborhood Market ne-Frys, kuhlanganise nezitolo zase-Irvington (isikhungo esikhulu sezitolo) ziqhele ngemizuzu engu-5-10 ngemoto!
Siyajabula ukukusiza phakathi nokuhlala kwakho futhi sikusize ngokusikisela! Singabathandi bokudla futhi singatusa izindawo ezinhle zokudla kanye nezinye zezintaba zethu eziyintandokazi! Sizobe sihamba ngokuphila kwethu kwansuku zonke futhi singaphazamisi indawo yakho noma isimiso sakho, kodwa sicela uzizwe ukhululekile ukusibuza imibuzo nganoma yisiphi isikhathi! Ungase ungasiboni kakhulu phakathi nokuhlala kwakho kuye ngezinhlelo zakho neshejuli yethu, kodwa lokho akusho ukuthi asitholakali ukusiza! Ngakho sicela usithinte uma kukhona okudingayo noma inkinga futhi singakujabulela ukukuxazululela!
Siyajabula ukukusiza phakathi nokuhlala kwakho futhi sikusize ngokusikisela! Singabathandi bokudla futhi singatusa izindawo ezinhle zokudla kanye nezinye zezintaba zethu eziyintand…